Anogovera mvura → Mapaki • Nzvimbo dzemitambo • Nhabvu yemitambo Warsaw
Iwe unoda here mvura inogovera, inonwiwa mupaki kana nzvimbo yemitambo? Iyo kambani yeWater Point inopa dzisiri-cylinder mvura dzinogadzira mvura, vanonwa doro, iko kunobva vatungamiriri venyika muindasitiri, yatagovera ndega muPoland.
Hunhu hwekunwa mvura hunopihwa nemawebhu emvura hunoongororwa muPoland nehutsanana uye Episcinologicalological, iyo inovimbisa kuti mvura inosvika kune vanogamuchira inokodzera kushandiswa.
Nyanzvi dzinobvuma kuti maguta mazhinji muPoland anogona kuzvirumbidza pamusoro pechinonaka uye nehutano hwemvura yemapaipi. mvura Iyo yakachena, isina hutachiona hwehutachiona uye zvishoma zvicherwa, saka unogona kuinwa iwe usatya.
Urwu ndirwo mhando yemvura inoyerera kubva kuzvitubu uye zvitubu zvemvura yekunwa, iyo yakanakira nzvimbo dzeveruzhinji, semuenzaniso mumapaki, maturu, minda, nzvimbo dzekutamba dzevana nemabhichi.
Kupa mukana wekuwana mvura yekunwa yakachena mumaguta, kunyanya kutarisa kunofanirwa kubhadharwa kunekuti nzvimbo dzakasvibirira, i.e. mapaki emadhorobha, nzvimbo dzekutamba uye nzvimbo dzese dzemitambo, uko kuwedzerwa kwemuviri wevanhu vanozvishandisa kunokonzera kuwedzera kwakawanda kwemvura yakachena, inopihwa. mvura.
Vana nevachiri kuyaruka, kunyanya panguva yekurovedza muviri zvakanyanya, vanoda huwandu hwakawanda hwemvura. Nekudaro, nekuisa matsime emvura ekunwa munzvimbo dzekutamba dzevana, pamwe nenzvimbo dzinoitirwa mitambo, unogona kupa mvura inonwiwa inonwiwa, iyo ichave imwe nzira yezvinwiwa zvisingaiti zvinotapira.
Imwe mukana wevanonwa kunze kweiyo mukana wekubvisa mabhodhoro epurasitiki uye kugadzira kuziva kwevadiki.
Nzvimbo dzekuvaraidza, matinji, mapaki uye nzvimbo dzemitambo inzvimbo dzinowanikwa zvitubu uye zvinwiwa zvemvura yekunwa, izvo zvisingangopedza nyota yako, asiwo zvinoshongedza nzvimbo iyi.
Kunwa matsime emvura kunotendera hutsanana uye nekukurumidza nyota ichipedza, uye dhizaini yemazuva ano inosimbisa kutaridzika kwenzvimbo.
Izvo zvakakosha kudzidzisa vana kubva vachiri vadiki kuti mvura kubva kune matsime uye matsime emvura yekunwa ndeye chete yekunwa zvinangwa uye kuti maoko kana matoyi haafanire kushambidzwa mariri.
Kunyanya muzhizha, vese vashanyi vanofamba mupaki kana vatori vechikamu vezviitiko uye mitambo yemitambo inoitirwa muzvivakwa zvemitambo vanoonga chokwadi chekuti vanogona kupedzisa kupedza nyota yavo nemvura inozorodza nehutano, inoyerera ichibva mudhisheni kana chitubu.
Kuisa zvishandiso zvinoita kuti kushandiswa kwemahara uye ehutsanana kushandiswa kwepamusoro kwemvura yekunwa munzvimbo dzemadhorobha kuri kuita mukurumbira, kwete muPoland chete, asiwo mune dzakawanda nyika dzeEurope. Kunwa mvura vanogadzira zviri nyore uye nyore kushandisa, saka vana, vachiri kuyaruka, vakuru uye vakuru vanogona kubudirira kuzvishandisa pese pavanoda. Iwe unogona kunwa mvura zvakananga, zadza yako wega bhodhoro kana imbwa mbiya nayo.
Iwe hauchada kutakura mvura mabhodhoro newe sezvo mvura nyowani uye inozorodza iri pedyo. Vanogadzira mvura vanobatsirawo kuchengetedza zvakasikwa nekubvisa zvakawandisa marara akagadzirwa.
Matsime emvura ekunwa akaiswa mumapaki uye munzvimbo dzemitambo ari kuwedzera kufarirwa nekuda kwekushandisa kwavo nehutsanana.
5 / 5 ( 33 mavhoti )
mvura yakachena mumapakimvura yakachena mupakimvura yemahara mumapakizvitubu mumapakikunwa matsime emvurapitniki mumapakivanonwa mumapakichidhakwa mupakimvura muzvivakwa zvemitambomvura mumapakikumwa mvura mumapakimvura mupakichitubu mumapakichitubu mvura mupaki